Raha ampitahaina amin'ny borosy nify mafy, ny borosy borosy malefaka dia tsy manimba ny nify ary nahazo sitraka tamin'ny mpanjifa maro. Andao hojerentsika akaiky ny mahasamihafa ny borosy nify malefaka sy ny fomba fampiasana borosy nify malefaka. Inona no mahasamihafa ny borosy nify malefaka a ...
Fomba hisafidianana borosy nify ho an'ny ankizy
Betsaka ny ray aman-dreny no mamboly ny fanaon'ny zanany miborosy nify hatramin'ny fahazazany, ka rahoviana no tokony hikorontana nify tsara kokoa ny zanany? Borosy nify inona no tokony hofidiko? Inona avy ireo fitandremana rehefa mifidy borosy nify ho an'ny ankizy? Andao hizara anio: Ahoana ny fisafidianana chi ...
Fomba hisafidianana borosy nify
Voalohany indrindra, rehefa mividy kaopy fanasana vava dia mila mitandrina ny famolavolana borosy nify amin'ny antsipiriany izay hazavaina amin'ireo dingana telo manaraka. Voalohany, mila mijery tsara ny endrika famolavolana borosy nify isika, toy ny volavola miendrika onja, izay mifanentana amin'ny vava ...